ULeticia Sierra. Ingxoxo nomlobi we-Animal | Izincwadi Zamanje
ULeticia Sierra. Ingxoxo nombhali Wezilwane
Izithombe: ngezilokotho zikaLeticia Sierra.
ULeticia Sierra Ungu-Asturian futhi uvela ezweni le ubuntatheli, kepha unikeze ifayela le- gxumela ezincwadini ngenoveli ngu ubulili obumnyama lokho kudala ukuthi abantu bakhulume. Ikona Animal. Kulokhu ingxoxo Usitshela ngakho nangezinye izihloko eziningi. Ngibazisa kakhulu umusa nesikhathi sakho abazinikele.
Leticia Sierra - Ingxoxo
LETICIA SIERRA: Amanoveli okuqala engiwafundile ayengabantu abasha: ama-adventures ka Esther y Abahlanu. Inoveli yokuqala "yabantu abadala" angikhumbuli kahle ukuthi yayiyini, kepha ngicabanga ukuthi kungaba isihloko esithile sayo Agatha Christie noma of UVictoria Holt.
Indaba yokuqala engiyibhalile yayineminyaka eyisithupha noma eyisikhombisa ubudala futhi kwaba njalo indaba, ngemidwebo nokuthi nami ngokwami ​​ngiyithungile ngentambo ukuyenza ibukeke njengaleyo engiyibone ezitolo zezincwadi.
AL: Iyiphi leyo ncwadi eyakuthinta futhi ngani?
SL: Umlando Wokufa Okubikezelwe, nguGabriel García Márquez ngoba ungumphangi otshelwa kakhulu emlandweni. Ngakuthola kumangalisa, kuyashaqisa, kunesihluku.
AL: Futhi lowo mbhali oyintandokazi? Ungakhetha ngaphezu kweyodwa nakuzo zonke izinkathi.
LS: UGabriel UGarcia Marquez, Isabel Allende, ULawrence Silva, U-Anne Perry, PD James, Agatha ChristieMary Amabanga aphezulu Clark, Dolores Redondo, Welula I-Läckberg... Futhi ngizoqhubeka nokubala.
AL: Yini esiyithola encwadini yakho, Animal?
SL: Animal yinoveli yobugebengu lapho ngenza khona i- sicabanga ukuthi umkhawulo wethu wokuziphatha ukuphi. Ukuthi umfundi uyazibuza ukuthi uzokwazi ukuhamba ibanga elingakanani ezimweni ezithile noma ezimeni ezithile, uma ezokweqa lowomugqa omuhle ohlukanisa umuntu nesilwane, esilwaneni.
Singakwazi ukubulala? Ngokuya ngezimo, ngiyaqiniseka ukuthi yebo, sonke siyakwazi ukweqa lowo mugqa engikhuluma ngawo, lowo mugqa ohlukanisa umuntu nesilwane. Futhi ngezinga elincane, usuku nosuku, kuvame kakhulu kunalokho esicabanga ukuthi sivumela impumulo yesilwane sethu ivele. Kulula kithina ukuphendukela ekuthukeni noma ekukhulumeni kunokusa ekuseni, ukujabulisa noma ukubonga. Siphila emphakathini lapho kulula khona ukuba mubi kunokuhle. futhi, okubi kakhulu, kwesinye isikhathi kubonakala kangcono futhi kufane nezitebhisi. Kuyasimangaza kancane kancane okusho ukuthi, ukusho okuncane, kuyakhathaza, hhayi ukusho ukuthi kuyingozi.
I-sinomuzwa wokuthi sisengozini kakhulu futhi sithambekele kakhulu ebudloveni, kungaba ngomlomo noma ngokomzimba ingenye yezimbazo zenoveli. Futhi ngingathanda ukubeka lokho kucabanga engqondweni yomfundi ukuze, ekugcineni kwencwadi, azithole ezwelana nendlela yami.
Futhi ngalokhu, ku Animal i uphenyo lwesigebengu esesabekayo edolobheni elincane futhi elinokuthula e-Asturias, kodwa kwenziwa ucwaningo ngezindlela ezimbili: amaphoyisa nezintatheli. Iphoyisa, ebelingisa umhloli weqembu Elibulala Amaphoyisa Kuzwelonke, nentatheli, elingisa nentatheli yendawo. Owokuqala, umugqa oqinile wophenyo futhi uvinjelwe kakhulu ngamaphoyisa nezinqubo zokwahlulela. Owesibili, uguquguquka kalula futhi unezindlela ezingaphansi kwezamaphoyisa, kodwa futhi okufeza imiphumela nemikhondo mayelana necala. Kokubili imigqa banikeza izinkomba umfundi walokho okwenzekile, ukuthi kwenzeke kanjani, kungani kwenzeke futhi bekungubani isandla esikhiphayo.
LS: A Hercule Poirot. Ubonakala kimi engumlingiswa owesabekayo, othakazelisa ngokwengqondo futhi ongaphelelwa yisikhathi ngokuphelele.
SL: Ukubhala ngidinga umsindo kuma: ithelevishini ivuliwe, abantu bayakhuluma futhi uma bexabana, kungcono kakhulu, umsindo, umsindo. Ukuthula kungihlonipha kakhulu futhi nesizungu futhi. Ngithanda ukuqaphela abantu abaseduze. Yingakho kunzima kakhulu kimi ukuthi ngingene ehhovisi ngibhale. Ngithanda ukubhala ekilasini, nomyeni wami nendodakazi yami eceleni kwami ​​futhi, uma kungenzeka, sixoxa. Eqinisweni, ngabhala ingxenye yale noveli endaweni yokudlela ngenkathi ngilinde indodakazi yami ukuthi iphume ekilasini layo lesiNgisi.
Kunalokho, ukuze ngifunde ngidinga ukuthula buthule. Angikwazi ukuma ngifunde ngomculo ngemuva noma kuvulwe i-TV. Ngakho-ke isikhathi engisithandayo engisifunda ebusuku nasebhedeni. Ngiyinqaba kanjalo.
SL: Ngibhala noma ngasiphi isikhathi. Manje sengisekhaya, nganoma yisiphi isikhathi. Imvamisa ekuseni. Lapho esebenza, lapho ebuya emsebenzini futhi lokho kwakuqala ngehora lesikhombisa ntambama kuze kube yishumi noma eleyishumi nanye ebusuku. Nsuku zonke. Futhi njengoba ngake ngakutshela ngaphambili, indawo engiyithanda kakhulu igumbi lokuphumula.
Ngikubekele ukufundwa ebusuku, ngokuvundlile noma ngokufanayo, embhedeni nasekuthuleni okuphelele.
AL: Izinhlobo eziningi zemibhalo?
SL: Isihloko sami esisalindile yizinkondlo. Angikwazi ukukuqonda futhi kunezinkondlo ezimbalwa kakhulu engizithandayo, kodwa ngenxa yokungazi kwami.
Mina gusta yaseshashalazini, ikakhulukazi leyo U-Alejandro Casona. Futhi i- inoveli yomlando ibuye idonse ukunaka kwami. Ngaphezu kwalokho, kungubulili lapho engeke angathembeki ebulilini bamaphoyisa.
LS: Ngifunda umbhali wase-Asturian: U-Alicia G. Garcia noveli yakhe yobugebengu Ijele. Ukuhlaziywa okukhulu kokugxeka namanga ezinhlelo ezithile zethelevishini nokuthi sizenyanya kangakanani noma singababukeli. Kunconywe kakhulu.
SL: Ngimusha emhlabeni wokushicilela. Kuyinoveli yami yokuqala, ngakho-ke angazi ngempela ukuthi ngikutshele ini. Kepha nginovalo lokuthi okuningi kubhaliwe, okuningi kakhulu kunokufundwayo, ukuze umlobi ahlale ezoba sengozini. Yebo yebo Ngibatshela bonke labo babhali abazama ukubenza bashicilele ukuthi abayeki ukuzama, ukuthi abaliphonsi ithawula, bayaqhubeka nokuthumela lo mbhalo wesandla, ukuthi babe ephikelela, njalo, ephikelela nokuthi bakholelwa kakhulu kubona nasemsebenzini wabo. Ngeke wazi.
AL: Yisiphi isikhathi senhlekelele esiphila kuyo ngokucabanga kwakho? Ngabe ungagcina okuthile okuhle noma okuwusizo kumanoveli esikhathi esizayo?
LS: Ngesikhathi ubucabanga ukuthi ukwethulwa kwale noveli, ehlelelwe uMeyi 2020, kuzodingeka ukuthi kuhlehliselwe uJanuwari 2021. Manje ukuxhumana nomfundi akukho, ngoba izethulo zingu on line, awukwazi ukuhlela imihlangano noma amasiginesha ubuso nobuso.
Ngicabanga lesi simo esiwubhadane kusishiya sinethemba. Kunemindeni eminingi kakhulu efile, miningi kakhulu imindeni ehlukaniswe unyaka futhi ehlekisa kakhulu ngaphandle kokuthola ubuchopho naphezu kwakho konke ukuthola ukufundwa okuhle. Ukuba yinto engasho lutho Ngicabanga ukuthi lesi simo lapho kungekho enye indlela ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi ekhaya sifundwa kabanzi futhi abanye bathole ukuthi ukufunda kuyajabulisa. Futhi lokho kuhle kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » ULeticia Sierra. Ingxoxo nombhali Wezilwane
UJordi Sierra i Fabra: izincwadi esizincomayo